2018-11-7 A pair of buses collide on a road between Harare and Rusape, Zimbabwe, killing at least 47 people.
Context: Harare, Zimbabwe
2016-08-26 Police and protesters clash in Harare after a court ruled that protests against Robert Mugabe can continue.
Context: 2016 Zimbabwe protests, Harare
2016-07-8 Protests in Harare and elsewhere in the country continue despite police intimidation and pleas by President Robert Mugabe for them to stop.
2016-07-7 Zimbabwean authorities arrest dozens of protesters as anti-government protests spread across the country.
Context: 2016 Zimbabwe protests, Zimbabwe
2016-07-6 National "Stay Away" protests, organized over the Internet via the WhatsApp social messaging platform, take place in Zimbabwe, following fears of an economic collapse amid calls for President Robert Mugabe's resignation.